विचार/ब्लग « Pathibhara Post
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले चाहेको मध्यावधि चुनावको घोषणा अदालतले खारेज गरेपछि उनले प्रधानमन्त्री पदबाट राजीनामा गर्नुपर्छ भन्ने आवाजहरू सुनिए । उनमा नैतिकता भए मात्र राजीनामा दिन्छन् भन्नेहरू पनि देखिए ।
एउटा झुठ छोप्न सयवटा झुठ र एउटा गल्ती ढाकछोप गर्न सयवटा गल्ती गर्नुभएको छ नेकपा एमालेका निलम्वित नेता माधवकुमार नेपालले । उहाँले आफ्नो राजनीतिक जीवनलाई झुठ र गल्तीको भण्डार बनाउनुभयो
पूर्णचन्द्र भुसाल – हाम्रा गाउँका जरे बाले एकदिन भन्थे, उहिले उहिले गाउँघरमा केहिकिछो परे कटुवाल लई घोक हाल्न लगाएर गाउँमा उर्दी जारी गरिन्थ्यो र कुनै एउटा चौपारीमा कचहरी राखिन्थ्यो ।
तत्कालीन एमाले र तत्कालीन माओवादी एकता हुँदा वैचारिकभन्दा प्राविधिक एकतालाई प्राथमिकता दिइएको थियो । प्रतिशत र भागबण्डामा केन्द्रित एकता थियो । संसदीय सिटमा भागबण्डा मन्त्रीमण्डलमा भागबण्डालाई त गठबन्धनमा सामेल दुई
प्रदीप नेपाल । विधिविधान भत्काउन पौरख ठान्ने चेतना भएको देशमा ठूलाठालुलाई संविधानको धारा गन्ने चासो कहाँ हुन्छ र ! जे हुन्छ त्यहीँ कानुनसम्मत मानिदिनुपर्छ सर्वसाधारणले । अहिलेको सङ्घीय सरकारको घोषणा यही हो ।
माधव नेपालले गर्दा, केपी ओली बदनाम, प्रचण्ड गुमनाम !
काठमाडौं । पूर्वमन्त्रीसमेत रहेका एकनाथ ढकाल नामका एक बिचौलिया नेताको सक्रियतामा भएको एशिया प्यासिफिक सम्मेलनले नेकपाका नेताहरुलाई बद्नामीको ठूलै भारी बोकाएको छ । रोचक के भने युनिभर्सल पीस फेडेरेशन नामक
नेपाल कमरेड फर्किनु भयो, पद जोगाउन कि सरकार ढाल्न ?
शालिकराम पराजुली नेकपा बिधिवत रुपमा दुई नहुँदै आफ्नै पार्टीबाट निर्वाचित सम्माननीय राष्ट्रपति सम्माननीय प्रधानमन्त्री लगायत सम्मानित नेताहरूलाई अपमानित ढङ्गले तिरस्कार गर्ने प्रयास गर्ने नेता कार्यकर्ता आफूलाई त्यस्तै अवस्था आयो भने
माधव–झलनाथहरुलाई केपी ओलीले अब यसो गर्नुपर्छ !
गाेविन्द थापा – केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले छाती चौडा बनाउनुपर्ने नयाँ राजनीतिक युगमा मुलुक प्रवेश गरेको छ । नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्र पुनर्स्थापना भएसँगै राजनीतिमा
पहिलो कुरा त विगतमा देउवा र प्रचण्ड मिलेर प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीविरुद्ध महाअभियोग दर्ता गरेका थिए । सरकारद्वारा कानुन मिचेर गरिएको आइजिपी नियुक्तिमा अंकुश लगाएकै कारण प्रधानन्यायधीशमाथि महाअभियोग लगाइएको थियो ।
डियर ‘कुमारी दिदी’ हो “बोल्न पाइन्छ” हामिले लडेर ल्याएको व्यवस्थामा बोल्न पाइन्छ! डियर “कुमारी दिदी” तपाइँले भने जस्तै बोल्न पाइन्छ, तर के-के बोल्न पाइन्छ? के-के बोल्न पाइदैन? नेपालको संविधान २०७२